အဆုံးဖြစ်သော FSX3နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #665
ငါ5အသက်အနှစ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးက Dell ရှိသည်။ ငါကဝယ်ယူသောအခါ, ရောင်းချခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဒဏ်ငွေခဲ့တဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ခဲ့ဟုဆိုသည် FSX။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ ငါကပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေမယ့်ဘယ်တော့မှငါလိုချင်သကဲ့သို့ကောင်းသောဘယ်နှစ်ခု dual- ဗီဒီယိုကဒ်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
Desktop အသစ်တစ်ခုဝယ်ဖို့အချိန်တန်ပြီ။ အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဗွီဒီယိုကဒ်ပြားနဲ့သိုးထီးဖြစ်နိုင်တယ် ပြproblemနာကကျွန်တော့်ရဲ့ကန့်သတ်ချက်က $ 500 ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် IE၊ Monitor, Keyboard နဲ့ Mouse တွေမလိုအပ်ပါဘူး။ ငါကအားလုံးကိုရတယ်။ ငါမျှော်စင်တစ်ခုလိုတယ်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ငါဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတာအတိအကျမသိဘူး။ ငါဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်သို့မဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ့်အကူအညီကိုငါနှစ်သက်တယ်။
အဆုံးဖြစ်သော FSX3နှစ်ပေါင်း 20 နာရီအကြာက #682
ဖြစ်နိုင်သည်မှာ GTX 1050 Ti နှင့် 8gb ram နှင့် im တို့ကို cpu ကဲ့သို့သောအခြားအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာမသိပါ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါအားလုံးဒေါ်လာ ၅၀၀ ထက်နည်းသောအစိတ်အပိုင်းများစွာကိုမသိဘူး
အောက်ပါအသုံးပြုသူ (s) ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် said: jimidget
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #704
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #705
ရုံအင်ဖိုအတွက်ဂျင်မ်, FSX အဆိုပါပိုကြီးပိုကောင်း, Processor ကိုအပေါ်အလွန်မှီခိုသည်။ သင်တစ်ဦး 1gb ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ရှိပါကသင်သည်ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ ငါအကောင်းတစ်ဦး i5 သို့မဟုတ် i7 7th ကျောက်မျက် Processor ကိုအကြံပြုလိမ့်မယ်။ ဒီကူညီပေးသည် ... အေဒီမျှော်လင့်ပါတယ်
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း 11 months ago #706
သင်တို့မူကားအဆုံးစွန်ပြောတဲ့အခါ FSX do you mean you're getting payware addons too. Because they're better quality (usually) they need better graphics card. Can you answer that before I recommend something? And as amberdog1 saidagood CPU isamust if you want good performance.
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း 10 months ago #719
အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ BTW, ကျွန်ုပ်သည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၀ င်ငွေအတွက်အနားယူပြီးဖြစ်သော vet ပါ။ ငါအပြည့်အဝဗားရှင်းကို run ဖို့စက်ကိုအဘို့အ Ebay ကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည် FSX.
သငျသညျအခွင့်အလမ်းရလျှင်သင်ကို eBay ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ငါ့ကိုတဦးတည်းကိုကူညီရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း9months ago #786
jimidget wrote: အချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ BTW, ကျွန်ုပ်သည်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၀ င်ငွေအတွက်အနားယူပြီးဖြစ်သော vet ပါ။ ငါအပြည့်အဝဗားရှင်းကို run ဖို့စက်ကိုအဘို့အ Ebay ကိုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည် FSX.
ရောင်းရန်3နေ့ရက်ကာလ၌အဆုံးသတ်ထားသည်။ $ 539.99 ပိုကောင်းလျင်။
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း9months ago #789
ကိုယ် Best Buy ကနေ Dell laptop ကိုအပေါ် $ 300 သုံးစွဲပါကဒဏ်ငွေပြေး။
သင်ပြုပါနှင့်ရှုခင်းအပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် add အပေါ်အခြား $ 200 ဖြုန်းနိုင်ဘူး။
MegaEarthScenery နှင့်အတူလိုပဲ။ နိုင်ငံတော်ကတတ်၏။ သင့်အိမ်ဧရိယာနှင့်အတူစတင်ပါ။
အဆုံးဖြစ်သော FSX2နှစ်ပေါင်း7months ago #820
ငါသာဒီအယူအဆအတွက်မှန်ကန်သောလျောက်ပတ်သောပရိုဆက်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည်သောယူဆချက်ကိုပြုပြင်ရန်ချင်ပါတယ်။ ငါတူးစင်ရတဲ့အခါစဉ်းစားသင့်တဲ့အရာတချို့ကိုထောက်ပြချင်ပါတယ် FSX or P3D မည်သည့်ဗားရှင်း။
1. FSX နှင့် P3D4နည်းနည်းဖြစ်သော V64 မှကြိုတင်, တူညီတဲ့အရာနှင့်ပြဿနာတွေအများကြီးရှိသည်ဖို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကား vas, OOM နှင့်မှုန်ဝါးဖြစ်ကြသည်။
2 ။ တစ်ဦးက SSD ကိုပုမှုန်ဝါးသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မဟုတ်သလိုက DX 10 ကို Preview တည်ဆောက်ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။
3 သင်ကကမ်ဘာပျေါမှာအလျင်မြန်ဆုံး processor ကိုရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်၎င်း၏ဖြစ်စေအထက်ပါမဆိုဖြေရှင်းသွားဘူး။
ထိုအခါအချို့သောကျိန်ဆိုနှင့်အခြားသူများကိုသူတို့လျော့နည်းပြဿနာများရှိသည်ဒါကြောင့်ခေတ်နောက်ကျ DX10c အပေါ်ဆက်လက်ရှိနေရန်ပိုနှစ်သက်ထိတွေ့ DX10 wont, သေး DX9.0c အားဖြင့်သင်တို့ကိုပင်ပိုကြီး vas နှင့် OOM ကာလတိုသော DX9.0 fixer ရှိ၏။
အကြောင်းကိုအမှုသည် Hacking ကို FSX ၁၀ နှစ်ကျော်ကြာကျွန်တော်တို့နှင့်အတူရှိခဲ့သည့်အချက်က၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များကိုအကန့်အသတ်ဖြင့်တွန်းအားပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လှည့်ကွက်တစ်ခုမှာလျောက်ပတ်သောပရိုဆက်ဆာတစ်ခုရှိသင့်သည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ skylake i107(7600k သည်ပရိုဆက်ဆာ၏စိတ်အားထက်သန်သောတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ် i67007ထက်အနည်းငယ်ပိုသာသည်။ (နောက်နောက်တည်ဆောက်မှုနောက်ကွယ်မှတည်ဆောက်ပြီးနောက်နှေးသည်) ဂရပ်ဖစ်ကတ်မှတ်ဉာဏ်တွင်အနည်းဆုံး ၁၀၆၀/၁၀၈၀ ၈-၁၆GB ဖြင့်အသုံးပြုသည် p3d site နှင့်သူတို့လိုအပ်ချက်များကိုစစ်ဆေးပါ, သူတို့ v4 unil ကတည်းကကွဲပြားခြားနားသော interface ကိုအတူတူပင် beast ဖြစ်ကြသည် FSX 32 bit ဖြစ်လျှင်၊ သင်သည်မည်သည့်အချိန်တွင် system မှ 2GB ထက်ပိုမိုသော memory ကိုအသုံးပြုမည်မဟုတ်။ မြန်သောပရိုဆက်ဆာ (quad၊ လျော့။ ဘာမှမကျန်တော့၊ သင်ယခုသင်ဝယ်ယူနိုင်သောစျေးနှုန်းအတွက်) နှင့်အလယ်တန်းမှထိပ်တန်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်။ Nvidia Grapics သည်လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကိန်းဂဏန်းများအတွက် AMD ထက်ဂရပ်ဖစ်စစ်ပွဲကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
အခုအချိန်မှာ memory သိပ်မကျန်တော့ဘူး၊ ဒါကြောင့် VAS ပြissuesနာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ abbord မှာ memory အလုံအလောက်ရှိတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အသစ်တစ်ခုကို ၀ ယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဈေးချိုလိမ့်မယ်။ ကဒ် (ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကိုဖြုန်းတီးရန်၊ မှတ်ဥာဏ်အများကြီးပါသောထိပ်တန်းဂရပ်ဖစ်ကတ်ကိုသိမ်းထားရန်နှင့်ဝယ်ရန်ကျွန်ုပ်၏လမ်းမှထွက်သွားမည်မဟုတ်ပါ၊ မည်သည့်ပျံသန်းမှုအတွက်မဆို၎င်း၏အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ skylake i500 စီးရီးမှလျောက်ပတ်သောပရိုဆက်ဆာသည်သွားရန်လမ်းဖြစ်သည်။ ) ။
0.268 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်